Batrị kachasị mma na ahịa | Akụkọ akụrụngwa
Ndị a bụ 7 nke batrị kachasị mma anyị nwere ike ịzụta taa
Villamandos | | Ngwa, Ngwa
Ọtụtụ n’ime anyị ndị ọrụ emeela mkpesa banyere batrị nke ekwentị mkpanaaka anyị kemgbe ụbọchị anyị zụtara ya. Ọ dabara nke ọma n'oge ndị na-adịbeghị anya, ụlọ akụ ike ma ọ bụ batrị ndị dị na mpụga amụbaala nke mere ka ndụ anyị dịtụ mfe, na-eme ka anyị pụọ n'ọtụtụ nsogbu ma kwe ka anyị ghara ịpụ na batrị na ọdụ anyị n'oge ọ bụla. Maka ndị na-amaghị ihe anyị na-ekwu, ngwaọrụ ndị a bụ obere batrị a na-ebugharị nke na-enye anyị ohere ịkwanye ekwentị ma ọ bụ mbadamba anyị n'oge ọ bụla na-enweghị dabere na ịnweta plọg dị nso.
Taa enwere ọtụtụ narị ụdị batrị ndị ọzọ na ahịa, sitere na ọnụ ahịa na-atọ ọchị ruo ọnụ ahịa dị oke elu, dabere n'ọtụtụ ọnọdụ na ikike ha, ọ bụ ezie na ọ dabere na imewe ha ma ọ bụ ọbụlagodi ndị na-emepụta ya. Yabụ na inweta otu n'ime ngwaọrụ ndị a abụghị isi ọwụwa nye gị, taa anyị ga-egosi gị 7 nke kachasị mma batrị dị na ahịa.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịzụta batrị dị na mpụga ma ọ bụ na ị na - eche ịnye ya onye otu ezinaụlọ gị ma ọ bụ enyi gị na ekeresimesi a, wepụta akwụkwọ na mkpịsị odee, ma n’elu ihe niile leba anya na ngwaọrụ niile anyị ga - egosi gị n’oge niile. isiokwu. Anyị ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ ole na ole ka ị nweta ihe ziri ezi mgbe ị na-enweta ụlọ akụ ike gị. Jikere ka anyị bido.
1 Bank Xiaomi Ike (16.000 mAh)
3 Sistem Ike 420056 (10.000 mAh)
7 Maazị Wonderful (2.600 mAh)
8 Ndụmọdụ anyị
Bank Xiaomi Ike (16.000 mAh)
Xiaomi ọ naghị ere ngwaọrụ ya n'ụzọ gọọmentị n'ọtụtụ mba, ọ bụ ezie na ọ dabara nke ọma na ha dị site na ndị ọzọ. Otu n'ime Ngwa kpakpando bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ụlọ akụ ya, nwere ikike nke 16.000 mAh, nke nwere ike, dịka ọmụmaatụ, kwụọ ụgwọ ekwentị abụọ n'otu oge (na nke a, ikike na-ejedebe na 3,6 A, nke kewara n'etiti abụọ, mana ọ bụrụ na ị jiri naanị otu ị nwere ike ịgba ya 2,1 A) na nke ahụ nwekwara ọnụ ala dị ala.
Site na imepụta mara mma ma belata, ngwaọrụ a nwere ike ịbụ ezigbo enyi maka njem ọ bụla ma nke ahụ ga - enyere anyị aka ịghara ịpụ batrị na ekwentị anyị ma ọ bụ na ngwaọrụ ọzọ.
Nwere ike ịzụta ihe a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
Ọ bụrụ na anyị na-achọ mpụga batrị nwere nnukwu ikike na-enye anyị ohere ọtụtụ Nchaji cycles, nhọrọ zuru oke doro anya bụ Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. nke ahụ na-enye 22.400 mAh.
Nnukwu ego nke MA nke ọ na-enye anyị, yana atọ ọdụ ụgbọ USB, anaghị egbochi anyị ịchọta kọmpat (8,1 x 2,4 x 16,1 centimeters) na obere ebumnuche nke na-enye anyị ohere ibuga batrị a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akpa ma ọ bụ akpa ọ bụla.
Ya price n'agbanyeghị ihe i nwere ike ikwere adịghị elu ma ọlị na anyị nwere ike ịzụta ya maka naanị 29 euro. Kedu onye na-achọghị ịnwe nnukwu ụlọ akụ ike maka obere euro?
Sistem Ike 420056 (10.000 mAh)
Otu nnukwu nsogbu batrị ndị dị na mpụga bụ na anyị na-efukarị eriri ndị ejiri jikọọ akụ ike na ngwaọrụ. Energy Sistem, nke nwere 10.000 mAh na-edozi nsogbu ndị a ma bụrụ na ọ nwere eriri arụnyere n'ime ya ma nye ya ohere ịnakọta n'ụzọ dị mfe iji zere ịla n'iyi. Ọ na-enyekwa anyị ohere ịrụ ọrụ n'ụzọ zuru oke na-enweghị usoro nsogbu na enweghị ekele maka nnukwu ego mAh.
Nhazi ya bụkwa otu n'ime ike ya dị ukwuu na nke ahụ bụ na obere ngwaọrụ a na kọmpat dị na agba dị iche iche. Ọnụahịa ahụ dị obere, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ nke ihe nlereanya a, anyị nwere ike ịsị na ọ dịghị ọnụ ala dị ka nsụgharị ndị ọzọ anyị nwere ike ịzụta. Iji nweta usoro a Energyist 420056 nke 10.000 mAh ị nwere ike ime ya site na Amazon na njikọ ọzọ.
Dị ka anyị kwurula n'ahịa ahụ, e nwere ọtụtụ narị ụdị dị iche iche nke batrị ndị ọzọ dị n'otu oge. Agbanyeghị, ụfọdụ n'ime ha nwere obere nkọwa dị iche iche na-atọ ụtọ ma na-atọ anyị ụtọ mgbe ụfọdụ ka anyị dabere nzụta otu ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ.
Iji maa atụ RAVPower nke ahụ na-enye anyị ikike nke 10.4000 mAh nwere a iSmart teknụzụ nke na-enye ohere ka ngwaọrụ gbanye ọsọ ọsọ. Dịka ọmụmaatụ, ịkwanye smartphone anyị, n'adịghị ka ụlọ akụ ndị ọzọ, ga-eme ngwa ngwa.
Ọ na-enwekwa ndụ nke ihe karịrị 1.000 ụgwọ cycles, nke bụ ihe dị mma ma dị mma maka onye ọrụ ọ bụla.
Ọnụ ya bụkwa nnukwu uru na nke ahụ bụ na anyị nwere ike inweta nke a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. site na Amazon maka euro 22.90.
Mgbe batrị ndị ọzọ na-apụta n'ahịa ha, ha bụ nnukwu ngwaọrụ, nke na-enye anyị obere usoro ịgba ụgwọ na ha dị oke ọnụ. Taa enwere ikike dị iche iche nke ụdị dị iche iche yana ọtụtụ narị atụmatụ. Ihe a bụ 3.000 mAh Aukey bụ ihe atụ.
Ma ọ bụ na obere nha na ibu ibu iji nwee ike ịkwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ama ọ bụla, a ga-eweta ya dị ka onye njem zuru oke. Na mgbakwunye, ọnụahịa ya nke na-erughị euro 10, dịka ọmụmaatụ, na-akpọ anyị òkù ka anyị nweta batrị nke ụdị a na nke ọzọ nwere nnukwu ikike na ikike maka oge ndị ka mma.
Nwere ike ịzụta ihe a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. site na Amazon maka a ọnụahịa nke 9 euro.
A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ na-adịghị na-eche kpọmkwem imewe nke ha mpụga batrị na ihe niile ha chọrọ bụ na o nwere nnukwu ikike. Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị a, a ike akụ ga-eme ka ị daba na ịhụnanya na nke ahụ bụ ọ gaghị enye gị ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ihe na-erughị 30.000 mAh nke ahụ ga - enyere gị aka ịgba ụgwọ ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba nkume n'ọtụtụ oge. Can nwere ike ịbụ ihe mgbakwunye zuru oke maka njem ahụ na enweghị ebe na ebe ị na-agaghị enwe ohere ịnweta ọkụ eletrik nke na-enye gị ohere ịnye ngwaọrụ gị dị iche iche.
Emepụtara site Nauc, Ọ na-enweghị usoro kachasị mma ma ọ bụ nke kachasị nke ọma, mana nke ahụ bụ nke abụọ kpamkpam mgbe anyị lere anya na mAh dị. Ya price bụkwa ihe ọzọ nke ya nnukwu uru na nke ahụ bụ na n'adịghị ka ndị ọzọ Ngwa na yiri àgwà ọ bụghị kwa elu.
Nwere ike ịzụta batrị mpụga a aka Nauc na Amazon maka ọnụahịa nke 30 euro.
Maazị Wonderful (2.600 mAh)
Iji mechie ndepụta a site na batrị kachasị mma dị na mpụga nke anyị nwere ike ịchọta taa n'ahịa anyị achọghị ichefu nke ahụ Ga-ahụ ịhụnanya na imepụta ya ma ọ ga-ahapụ gị ntakịrị nleghara anya n'ihi ọnụahịa ya na ikike ya.. Anyị na-ekwu maka ụlọ akụ ike nke ama ama ama Mazi Ebube na iji mara mma mara mma ga-enye anyị ohere igosi ma gosipụta ịgba anyị n’oge ọ bụla na akuku ọ bụla.
O di nwute na ikike ya bu nani 2.600 mAh, nke ima atu agagh ezu iji zuru oke onu ogugu nke igwe di na ahia. Ọnụahịa ya na-agbakwa ruo euro 25, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji nweta ya na mbelata oge ụfọdụ.
Ọ bụrụ na ihe ị na-eche banyere ụlọ akụ ike ọhụrụ gị bụ imewe, ịnwere ike ịzụta ịma mma nke Maazị Wonderful site na Amazon na njikọ ọzọ.
Mgbe anyị hụsịrị ndepụta nke batrị ndị ọzọ anyị gosiri gị, anyị enweghị ike ịhapụ na-enweghị inye gị usoro nke ndụmọdụ anyị chere nwere ike ịba uru ma na-atọ ụtọ. Nke mbụ, anyị ga-akwusi ike ka ị zụta ngwaọrụ nwere nnukwu ikike nke na-enye gị ohere ịghara ịgba ụgwọ ya, dị ka ama gị kwa ụbọchị. Ọzọkwa, ọ bụrụ na onye ọzọ chọọ ịgba ekwentị ha ma ọ bụ mbadamba, ị nwere ike ịnye ha ụfọdụ nke mAh gị. Ọ bụrụ na ịzụta ụlọ akụ ike jiri atụmatụ dị mma, mana ikike belata, ị ga-akwụ ụgwọ ọnụ gị, yana yana nchekwa zuru oke ị ga-ejikọ ya na nke ugbu a kwa abalị.
Ndụmọdụ ọzọ dị mkpa bụ na zụta batrị gị na mpụga na ụlọ ahịa a ma ama, ebe ọ bụ na ọtụtụ ụdị ụdị ngwaọrụ a na-abawanye na ụlọ ahịa ndị China, site na ebe ha na-ewe izu iji rute yana kwa n'ọtụtụ oge ha anaghị eme ya n'ọnọdụ ndị a tụrụ anya. Ọnụahịa ha na-adịkarị ala karịa ihe anyị nwere ike ịchọta na mba anyị, mana ogo dịkwa iche.
Na nkenke, anyị nwere ike ịgwa gị na ị ga-achọ ezigbo na batrị mara mma, mara mma ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume na-enweghị ịbụ ihe kachasị mkpa, dị ọnụ ala yana karịa ihe niile nwere ikike buru ibu ka anyị wee nwee ike iburu ọtụtụ ebubo na ama ma ọ bụ mbadamba anyị. Ọ bụrụ na anyị nwekwara ike ịchọ gadget nwere ụfọdụ njirimara ndị ọzọ dịka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa, nguzogide mmiri ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ka mma karịa ka mma, mana ejiri m obi m kwere na ọ gaghị abụ ihe kachasị mkpa na nke ọ bụla.
Kedu njirimara ị chere kacha dị mkpa mgbe ịzụrụ ụlọ akụ ike?. You nwere ike inye anyị echiche gị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ ọ bụla ebe anyị nọ na ebe anyị na-atụ anya isoro gị kparịta ụka obere oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Ndị a bụ 7 nke batrị kachasị mma anyị nwere ike ịzụta taa
N'ehihie, ọnụ ọgụgụ nke mAh na-emetụta, ọbụlagodi na m nwere 2200 mAh maka Samsung S4 na ọ na-ebu batrị zuru ezu. Dị ka akọwara ebe a, mAh ga-adị ukwuu karịa ihe batrị dị n'ime ekwentị ekwentị nwere. Ihe Nlereanya ma ọ bụrụ na batrị bụ 1700 mAh, mgbe ahụ ụlọ akụ ike ga-adị n'elu 2000, 3000,6000 mAh.
6 smartphones zuru oke inye ma ọ bụ nye onwe gị ekeresimesi a
Nchịkọta egwuregwu na ọnụ ụlọ dị egwu